ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: အစိမ်းရောင် ခြေအိတ် တစ်စုံရဲ့ အရိပ် (၂)
အစိမ်းရောင် ခြေအိတ် တစ်စုံရဲ့ အရိပ် (၂)
ကျောင်းစာတွေက များသထက် များလာပြီ။ ကျောင်းသူကျောင်းသား တော်တော်များများလဲ ဒီနှစ်ဝက် စာသင် ချိန် အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု များလာတာမို့ ကျောင်းဆေးရုံ ပြေးရတဲ့ နှုံး များလာပြီ။ သူမ မှာတော့ တိုက်ဆိုင်စွာ အစိုးရ ပြောင်းချိန် မိသားစု ရှယ်ယာ ပါသော ဘဏ်များ ဒေ၀ါလီ ခံခြင်း၊ သမီးကညာ ရွယ်ရောက်လာ ဆိုတဲ့ ဂါထာ ဟောင်းကြီး ရွတ်ကာ ရွတ်ကာ ဘာဝနာ ပွားတတ်သော မိဘများနဲ့ အတိုက်အခံ ပြုရခြင်း၊ ကိုယ့်ကို ပညာသင်ဆု ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အဲဒီနှစ် အတွက် ရန်ပုံငွေကို ကျောင်းသားများ အစား ဒုက္ခသည် စခန်း များသို့ ပေးရန် ဆုံးဖြတ် ချက်ကြောင့် ကျောင်းတန်းလန်းနဲ့ ငွေပြတ်ခြင်း၊ ပေါချောင်ကောင်း ငှားနေသော အဆောင်မှာ ဈေးသက်သာ လွန်းသောကြောင့် နေချင်သူများ တန်းစီ နေချိန်တွင် အခန်းဖော်က သူ့ညီမ မကြာခင် တက္ကသိုလ် တက်တော့မည်မို့ သူမနဲ့ အတူတူ နေစေချင်တိုင်း ကိုယ့်ကို အဆောင်မှူးက နှင်ထုတ် အောင် ချောက်တွန်းခြင်း၊ ကျောင်းက ပေးမယ့် ပညာသင်ဆု အပြိုင် လျှောက်ထားသော အတန်းဖော် ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်သူ ကျောင်းသားရဲ့ မစမှုကြောင့် computer lab ထဲက သူမရဲ့ ပရောဂျက် ဒေတာတွေ ပျောက်ဆုံးခြင်း ………….
သက်ပြင်းပူကို မှုတ်ထုတ်ရင်း ကျောင်းပြန် မဖွင့်ခင် လာမယ့်နှစ် ကျောင်းလခ ရှာပုံတော် ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားရ သည်မှာ ဆံပင်တောင် ပါးသည်။ သို့သော် ကိုယ် မမြင်ချင် မတွေ့ချင် သည်များကို မြင်တွေ့ရ နိုင်လောက် သော ဧည့်လမ်းညွှန် အလုပ်ကို လုံးဝ မလုပ်တော့ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ် လိုက် ပြီမို့ ကိုယ့်အလုပ်ကို သူတပါး လက် လွှဲဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားခဲ့လေပြီ။ မမြင်ချင် မတွေ့ချင် သည်များ ဆိုသည်မှာ တခြား မဟုတ်။ ကိုယ့်မှာတော့ ဒီလောက် မအားတဲ့ ကြားက တပတ် တရက်ကို ဖဲ့ကာ ကိုယ့်လူမျိုး အလုပ်သမား တွေရဲ့ ပညာရေး အတွက် လုပ်အားပေး ဆရာမလေး အိတ်စိုက် ၀င်လုပ်ရင်း အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် ထိန်းသိမ်းဖို့၊ မိန်းကလေးများ ငွေ နောက် လိုက်ရင်း ဘ၀ ပျက်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် စိတ်နဲ့ အနေအထိုင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြောဆို ကြိုးစား လိုက်ရတာ… ခုတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပွဲတော် ရက်များမှာ လာရောက် လည်ပတ်သူ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက လုပ်ငန်းရှင် ဆိုသူကြီး များက ကိုယ့်ဝန်ထမ်း သမီး အရွယ်လေး များကို တိတ်တိတ်ပုန်း အပျော် မယား အဖြစ် ခေါ်လာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ လည်ပတ် ပျော်ပါး နေလိုက် ကြတာ.. အပြန် ခရီးကျ သူတို့ မဟုတ် သလိုပင်… မတွေ့ချင် မြင်လျက် သားမို့ သက်ပြင်းမောသာ ခဏခဏ ချမိတော့သည်။ ကိုယ့်ညီမ အရွယ်လေးတွေ… နိုင်ငံခြားမှာမို့ ဘယ်သူသိတာ မှတ်လို့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လွတ်ထွက် နေလိုက် ကြတာ.. ကိုယ့်တန်ဖိုးက မယားငယ် အဆင့် တောင် မရှိတော့ဘဲ လိုချင် တာလေး ၀ယ်ပေးရုံ၊ မုန့်ဖိုး ပေးရုံနဲ့ ပျက်စီးပြီး ပညာတတ် ဘွဲ့ရ ဘ၀ ကနေ ကြေးစား အသွင်ဆောင် သွားတာ ကို သတိ ထားလိုက် မိပုံ မပေါ်။ လူမသိအောင် ခိုးစားတာမို့ ငွေနဲ့ မျှားတဲ့ သားသမီးချင်း မစာနာ မြက်နုကြိုက်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ဖျက်ဆီး နေတဲ့ လူကြီး လူကောင်း မျက်နှာဖုံးရှင် များကလဲ တာဝန် ယူစရာ မလို။ မြင်ရ တွေ့ရ စိတ်သက်သာစရာ တခုမှ မရှိ… အမြင်မတော်ရင် အငြိမ် မနေတတ်သော ဒီပါးစပ်ကို သတိထား ပိတ်ရသည်မှာ စိတ်ပင်ပန်း လှသည်။ အင်း တခြား အချိန်ပိုင်း အလုပ် ရှာဦးမှ… ကျောင်း ကင်တင်းန်များ အဆောင် နံရံများက ကြော်ငြာ သင်ပုန်း များကို လိုက်ဖတ်ရင်း အလုပ် ကြော်ငြာနဲ့ ပညာသင် ဆု လျှောက်လွှာ များကို မူးလောက်အောင် လိုက်ရှာ ရသည် မှာလဲ အလုပ်တစ်ခု…
တူ…… တူ………… တူ……………
မြည်လာသော လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်တော့ သူ… ဖုန်းကို ပိတ်ချ ပစ်လိုက် ချင်ပေမယ့် မပိတ်ဖြစ်ခဲ့။ အစွယ် ရှိပြီး အဆိပ် ပြင်းသူရဲ့ မျက်စောင်းက အန္တရာယ် များသည်လေ။ ကိုယ်က ဒီနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသူ ပေါက်စလေး.. သူ့မှာ ဘယ်လို အချိတ် အဆက် နောက်ခံ အင်အား ရှိသလဲ ဆိုတာက အကုန် သိရသေးတာ မဟုတ်။ လေသံနဲ့ စကားလုံး မပြင်းထန်အောင် ကိုယ့် ကိုယ်ကို သတိပေးရင်း
ညီမရေ.. ကိုယ်ရောက်ပြီ.. ခု ကျောင်းပိတ်ရက် မဟုတ်လား ဘာလို့ အိမ်မပြန်လဲ.. ကိုယ်က အိမ်ပြန်တယ် မှတ်လို့ အိမ်ကို မေးလိုက်သေးတယ်။ ပြန်မလာဘူး ဆိုတာနဲ့ ရောက်တုန်း ဖုန်းဆက်လိုက်တာ..
ပြန်လဲ စရိတ်ကုန်ပြီး အချိန် ကုန်ရကျိုး နပ်လောက်အောင် အကျိုးရှိအောင် လုပ်နိုင်မယ့် အလုပ်လဲ မရှိနေ တာနဲ့ စာတမ်းအတွက် စာဖတ်မယ် ဆိုပြီး မပြန်တော့တာ
ပိုက်ဆံ လိုလို့လား။ လိုရင် အားမနာနဲ့ ကိုယ့်ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပါလို့ ပြောထားတာကို… မာနကလဲ ကြီးလိုက်တာ. စကောလားရှစ်ရော လောက်ရဲ့လား။ နေကတော့ ကောင်းမှာပါ.. လေသံက အမာကြီး ပဲဟာ…
လောက်ပါတယ်.. ဒါထက် ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲဟင်
ကိုယ် ဒီတပတ် အစည်းအဝေးက တပတ်ကျော်တောင် ကြာမယ်ဗျာ.. presentation တွေလဲ မပြီးသေးဘူး စိတ်ညစ်လိုက်တာ.. ကူပေးနိုင်မလား။ မုန့်ဖိုး ပေးပါ့မယ်ဗျာ.. အလကား မခိုင်းပါဘူး.. အလုပ်မထွက်ခင်ကလို project လိုက် လုပ်တယ် သဘောထားပေါ့…
ကျောင်းပိတ် ထားပေမယ့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ စာတမ်းခေါင်းစဉ် တင်ရမှာမို့ ဆရာက စာဖတ်ခိုင်း ထား လို့… ဆောရီးပါနော်
သြော် ဒါဆို လုပ်လုပ်.. ကိုယ် တခြား မိတ်ဆွေ တွေကိုပဲ အကူအညီ တောင်းလိုက်တော့မယ်.. လမ်းကြုံရင် လက်ဆောင် ၀င်ယူဦးလေ.. ကိုယ် --- ဟိုတယ်မှာ တည်းတယ်။ နောက်အပတ် စနေ ပြန်မယ်။ အိမ်ကို မှာချင်တာ ပေးလိုက်ချင်တာ ရှိရင် လူကြုံ ပေးချင်လဲ ရတယ်.. အလကား သယ်ပေးမှာပါ.. ဒါပဲနော်.. တိတ်ကဲ.. တာ့တာ
ဖုန်းပိတ်ရင်း ကြော်ငြာ သင်ပုန်း တခုပြီး တခု ကူးပြီး ကြော်ငြာ ဖတ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းစွာ စာတမ်းရှင် တော်တော် များများက မေးခွန်းလွှာ လိုက်မေး ပေးသူများ ငှားရမ်း နေကြချိန်… မေးခွန်းလွှာ တစ်စုံကို ၃၀၀ ဆိုတော့ တစ်ရက်ကို အယောက် ၂၀လောက် မေးနိုင်ရင် မဆိုးလှ.. ဧည့်လမ်းညွှန် အလုပ်ထက် ပိုပင်ပန်း ပိုခက် ပေမယ့် ငွေပိုရသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန် အလုပ်က ဖန်တရာတေ နေသော အချက် အလက် များကို အပျော် လည်ပတ်သူများ သိရုံလေး ရှင်းပြ ရုံသာ။ ဒီ စာတမ်း မေးခွန်း မေးသူ အလုပ် က တော့ ပညာရေး နယ်ပယ်က မဟုတ်သူ များ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ စကားလုံး များကို နားလည်အောင် အရပ်သုံး စကားနဲ့ ရှင်းပြရ၊ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ဖြေဖြစ်အောင် လမ်းကြောင်းပေးရ သည်မှာ ပညာသား ပါလှသည်။ ဒီလိုနဲ့ သူမ အလုပ် ပြောင်းခဲ့ လေသည်။ (ဆက်ရန်)
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:53 AM
၂ ပိုင်းလုံး တပြိုင်တည်းဖတ်သွားတယ်..
ပထမပိုင်းတုန်းက ၀တ္ထုတပုဒ်လို့ ပဲ အောင့်မေ့မိတာ…
ဒုတိယပိုင်းဖတ်တော့ သစ္စာဖြူ ထဲမှာ လှိုင်က စီးမျောပျော်ဝင်နေသလိုပဲ…
အနာကို ဖုန်းအုပ်ထားတဲ့ ခြေအိတ်တအိတ်လိုပဲ… ကိုယ့်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းမှုကို ဖုန်းကွယ်ထားတဲ့ စကားချိုချိုတွေ…
ခြေအိတ်တစုံရဲ့ အရိပ်ကို စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်…